မန္တလေးရှိ အတည်ပြုလူနာ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး သွားလာထိတွေ့ခဲ့သည့် ဆိုင်အချို့ကို ယာယီပိတ်ပင်ကာ Home Quarantine သတ်မှတ် (ရုပ် သံ) - Padaethar
မန္တလေးရှိ အတည်ပြုလူနာ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး သွားလာထိတွေ့ခဲ့သည့် ဆိုင်အချို့ကို ယာယီပိတ်ပင်ကာ Home Quarantine သတ်မှတ် (ရုပ် သံ)
August 29, 2020 by Padaethar
မန္တလေးရှိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး သွားလာထိတွေ့ခဲ့သည့် ဆိုင်အချို့ကို ယာယီပိတ်ပင်ကာ Home Quarantine သတ်မှတ်
ရိုက်ကူး၊တင်ဆက် – မောင်မင်းမော်၊ ဒီဒါင်းမေ၊ သြဂုတ်-၂၉
မန္တလေးမြို့ရှိ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ထွန်တုံးရပ်ကွက်ရှိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ အသက်(၁၇)ရွယ် အမျိုးသမီး သွားလာ၊ ထိတွေ့ခဲ့သည့် ဈေးဆိုင်အချို့ကို ယာယီပိတ်ပင်ကာ ထိတွေ့မှု ရှိနိုင်သူများကိုလည်း Home Quarantine နေထိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ….
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ဒု-မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိုးဇေယျာထွန်း က Mandalay In-depth News အား ပြောသည်။“လတ်တလော ဆက်စပ်တဲ့လူကတော့ ကျွန်တော်တို့ စိစစ်ချက်အရပေါ့နော်။ အသေးစိတ်ကတော့ ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။
လတ်တလော စိစစ်ချက်အရတော့ သူတို့သွားခဲ့တဲ့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရယ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရယ်။ ကုန်စုံဆိုင် တစ်ဆိုင်ရယ် ကျွန်တော်တို့က လတ်တလောမှာတော့ Home Quarantine ပေါ့။
ဒီဆိုင်တွေကို လုံးဝမဖွင့်ဖို့နဲ့ ၊ နေရာကနေ အပြင်မထွက်ဖို့ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်”ဟု ဦးစိုးဇေယျာထွန်းက ပြောသည်။မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ကန်တော်ကြီး သံဃာ့ဆေးရုံ၌ အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထားသည့် အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း….
အဆိုပါ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသည် မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ထွန်တုံးရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အမျိုးသမီးနှင့် မိခင်၊ ညီမတို့သည် သြဂုတ်(၁၇)ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့မှ မန္တလေးမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများ ဖြစ်သဖြင့် သြဂုတ်(၂၇)ရက်၊
ညပိုင်းမှစတင်ကာ မန္တလေး ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီး Quarantine Centre ၌ ထားရှိကာ အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် Swab (အာခေါင်တို့ဖတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ) ရယူ၍ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး)သို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးခဲ့ရာမှ COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
အဆိုပါ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသည် မန္တလေးမြို့၌ သုံးရက်အတွင်း ဒုတိယမြောက် စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် လူနာဖြစ်လာပြီး သြဂုတ်(၂၇)ရက်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှ လာရောက်ပြီး မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ရဲအရာရှိသင်တန်းကျောင်း၌ စခန်းမှူးသင်တန်း တက်ရောက်နေသည့် အသက်(၄၀)အရွယ် ရဲအုပ်တစ်ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး ကူးစက်နေသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် မန္တလေးမြို့၌ စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် အတည်ပြုလူနာ နှစ်ဦးအား ကန်တော်နဒီ ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေကုသပေးထားသည်။
#Mandalay_Indepth_News #MandalayInDepthNews #ကိုဗစ် #COVID-19 #မန္တလေး #Positive
မန်တလေးရှိ COVID-19 အတညျပွုလူနာ အသကျ(၁၇)နှဈအရှယျ အမြိုးသမီး သှားလာထိတှခေဲ့သညျ့ ဆိုငျအခြို့ကို ယာယီပိတျပငျကာ Home Quarantine သတျမှတျ
ရိုကျကူး၊တငျဆကျ – မောငျမငျးမျော၊ ဒီဒါငျးမေ၊ သွဂုတျ-၂၉
မန်တလေးမွို့ရှိ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ထှနျတုံးရပျကှကျရှိ COVID-19 အတညျပွုလူနာ အသကျ(၁၇)ရှယျ အမြိုးသမီး သှားလာ၊ ထိတှခေဲ့သညျ့ ဈေးဆိုငျအခြို့ကို ယာယီပိတျပငျကာ ထိတှမှေု့ ရှိနိုငျသူမြားကိုလညျး Home Quarantine နထေိုငျရနျ သတျမှတျထားကွောငျး ….
ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ဒု-မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစိုးဇယြောထှနျး က Mandalay In-depth News အား ပွောသညျ။“လတျတလော ဆကျစပျတဲ့လူကတော့ ကြှနျတျောတို့ စိစဈခကျြအရပေါ့နျော။ အသေးစိတျကတော့ ကနျြးမာရေးဌာနနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနတေယျ။
လတျတလော စိစဈခကျြအရတော့ သူတို့သှားခဲ့တဲ့ စားသောကျဆိုငျ တဈဆိုငျရယျ၊ လကျဖကျရညျဆိုငျ တဈဆိုငျရယျ။ ကုနျစုံဆိုငျ တဈဆိုငျရယျ ကြှနျတျောတို့က လတျတလောမှာတော့ Home Quarantine ပေါ့။
ဒီဆိုငျတှကေို လုံးဝမဖှငျ့ဖို့နဲ့ ၊ နရောကနေ အပွငျမထှကျဖို့ ဆောငျရှကျထားရှိပါတယျ”ဟု ဦးစိုးဇယြောထှနျးက ပွောသညျ။မန်တလေးမွို့ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ကနျတျောကွီး သံဃာ့ဆေးရုံ၌ အသှားအလာ ကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ထားသညျ့ အသကျ(၁၇)နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးတဈဦးတှငျ COVID-19 ရောဂါပိုး စဈဆေးတှရှေိ့ကွောငျး….
အဆိုပါ COVID-19 အတညျပွုလူနာသညျ မန်တလေးမွို့ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ထှနျတုံးရပျကှကျတှငျ နထေိုငျသူဖွဈပွီး အဆိုပါ အမြိုးသမီးနှငျ့ မိခငျ၊ ညီမတို့သညျ သွဂုတျ(၁၇)ရကျတှငျ ရခိုငျပွညျနယျ၊ မငျးပွားမွို့မှ မန်တလေးမွို့သို့ ပွနျလညျရောကျရှိလာသူမြား ဖွဈသဖွငျ့ သွဂုတျ(၂၇)ရကျ၊
ညပိုငျးမှစတငျကာ မန်တလေး ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကွီး Quarantine Centre ၌ ထားရှိကာ အသှားအလာ ကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွောငျး၊ ထို့နောကျ Swab (အာခေါငျတို့ဖတျ ဓာတျခှဲနမူနာ) ရယူ၍ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန(မန်တလေး)သို့ ပေးပို့ စဈဆေးခဲ့ရာမှ COVID-19 ရောဂါပိုး စဈဆေးတှရှေိ့ခွငျး ဖွဈသညျဟု သကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေး တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။
အဆိုပါ COVID-19 အတညျပွုလူနာသညျ မန်တလေးမွို့၌ သုံးရကျအတှငျး ဒုတိယမွောကျ စဈဆေးတှရှေိ့သညျ့ လူနာဖွဈလာပွီး သွဂုတျ(၂၇)ရကျကလညျး ရခိုငျပွညျနယျ စဈတှမွေို့မှ လာရောကျပွီး မန်တလေးမွို့ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ ရဲအရာရှိသငျတနျးကြောငျး၌ စခနျးမှူးသငျတနျး တကျရောကျနသေညျ့ အသကျ(၄၀)အရှယျ ရဲအုပျတဈဦးတှငျ COVID-19 ရောဂါပိုး ကူးစကျနသေညျကို စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့သညျ။
လကျရှိတှငျ မန်တလေးမွို့၌ စဈဆေးတှရှေိ့သညျ့ အတညျပွုလူနာ နှဈဦးအား ကနျတျောနဒီ ဆေးရုံသို့ ပွောငျးရှကေုသပေးထားသညျ။
#Mandalay_Indepth_News #MandalayInDepthNews #ကိုဗဈ #COVID-19 #မန်တလေး #Positive
Categories ပြည်တွင်းသတင်း Post navigation
ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ တစ်ပြုံကြီး ကွာရတင်းဝင်ရကိန်းလား…
(၃၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အတည်ပြုလူနာသစ် (၁၆) ဦးတွေ့ရှိ